Nandà tsy hanafoana ny fandrarana ny fivezivezena amin'ireo mpankafy Rosiana UEFA EURO 2020 i Danemark
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nandà tsy hanafoana ny fandrarana ny fivezivezena amin'ireo mpankafy Rosiana UEFA EURO 2020 i Danemark
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Danemaka • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Sports • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Voarara tsy hiditra ao Danemark ny mpitsidika izao raha tsy hoe manana “tanjona mendrika”, izay tsy tafiditra amin'ny fanatrehana lalao EURO 2020.
Copenhagen dia iray amin'ireo tanàna mampiantrano 11 amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Eropa Eropa 2020
Mihatra amin'ny mpankafy Rosiana ny fameperana ny dia noho ny toe-javatra misy amin'ny aretin'ny COVID-19.
Rosia dia ao anaty vondrona 'volomboasary' ao amin'ny lisitr'i Denmark mandràra ny fameperana fitsangantsanganana mizara firenena ho sokajy miloko
Nanamafy ny tompon'andraikitra ao amin'ny UEFA fa tsy hanome famindram-pahefana fitsangatsanganana ho an'ireo mpankafy baolina kitra Rosiana manantena ny hijerena ny ekipan'izy ireo any Copenhagen ao i Danemark. EURO XUMX fifaninanana amin'ity fahavaratra ity.
Copenhagen dia iray amin'ireo tanàna mampiantrano 11 amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Eropa eran-tany amin'ny taona 2020, izay ny kianjan'i Parken Stadium no toerana hanaovana lalao efatra, anisan'izany ny fihaonan'ny vondrona B eo amin'i Danemarka sy i Russia amin'ny 21 jona.
Ny famerana ny dia any COVID-19 danoà ankehitriny dia midika fa voarara tsy hiditra ao Danemark ny mpitsidika avy any Russia raha tsy manana “tanjona mendrika”, izay tsy tafiditra amin'ny fanatrehana lalao EURO 2020.
Raha ny vinavinan'ny tompon'andraikitra amin'ny fanatanjahantena rosiana, midika izany fa mpankafy rosiana manodidina ny 2,500 miaraka amin'ny tapakila ho an'ny lalao miaraka amin'i Danemark no tsy afaka mizaha ny lalao.
Tao anaty taratasy iray ho an'ny UEFA tamin'ity herinandro ity, nangataka tamin'ny filan-kevi-pitantanana ny baolina kitra ny tompon'andraikitra misahana ny baolina kitra rosiana (RFU) mba handray an-tanana ny olana.
"Ny RFU dia manahy mafy ny amin'ny toe-javatra manodidina ny tsy fahafahan'ny fidiran'ny mpankafy ny ekipam-pirenena Rosiana amin'ny lalao eo amin'ny sehatry ny vondrona amin'ny dingana farany an'ny UEFA EURO 2020 any Danemarka," hoy ny fanoratra.
"Miangavy anao izahay handinika haingana ny mety ho fanekena ireo mpankafy amin'ilay lalao ary hanolotra fomba iray hamahana izany toe-javatra izany."
Taty aoriana dia nanamafy ny UEFA fa nipoitra tamin'ny tompon'andraikitra amin'ny lalao baolina kitra any Danemark io olana io, na dia nahazo valiny aza izy ireo fa tsy hihetsika ny firenena.